संजय श्रीपालको आवाजमा “घर बिगारा २ ” (भिडियो) – Glammandu Online
kusum	 Jul 4, 2020
संजय श्रीपालको आवाजमा “घर बिगारा २ ” सार्वजानिक भएको छ।
अहिले कोरोना भाइरसको महामारीमा फसेको छ । यो अवस्थामा पिंडा सबैलाई भएता पनि आफ्नो देशको चिन्ता अलि बढी सबैलाई हुने गर्दछ । हाम्रो देश नेपाल, जहाँ गरिबीको कारणले धेरै नेपालीहरु पर्देशिन बाध्य बनेका छन् । राज्यले बेरोजगारी समस्याको समाधान गर्नुको सट्टा अहिलेको सक्रमणको घडीमा बाध्यता बस परदेशिएका नेपालीहरुलाई उद्धार गर्न समेत नसकिरहेको गुनासोहरू सुन्न सकिन्छ ।
यी र यस्तै परिस्थितिलाई केन्दित गर्दै नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा बेलाबखत बिभिन्न गीतह? आइरहेका हुन्छन् । सोहि क्रममा भर्खरै मात्र असंख्य श्रोता तथा दर्शकहरुको रोजाईमा आधारित रहेर समाजको बास्तविक जिवन भोगाईलाई आधार बनाइएको घर बिगारा गीतको भिडियो डिजिटल बजारमा सार्वजनिक भएको छ ।
गायक संजय श्रीपालको आवाजमा रहेको गीत बजारमा आए सगै चर्चाको शिखरमा रहेको छ । विदेशमा धन कमाउनको लागी गएको श्रीमान लाई श्रीमतीले घात गर्दाको पिडालाई गीतमा समेटिएको छ ।
संजय श्रीपालको शब्द तथा लय सिर्जना गीतमा रहेको छ । रामु विरहीको छायाँकन तथा मनोज कार्कीको सम्पादन र संजय श्रीपालीको निर्देशन भिडियोमा रहेको छ । “घर बिगारा २ ” गीत विशुद्ध रुपमा संजय श्रीपाल, कुशल सुनार , पुष्पा रसाइली , प्रेम सिंह र चम्पा देवीको अभिनय गीतमा रहेको छ ।
ghar bigaraghar bigara 2
kusum 105 posts0comments
भगवान शिवको दर्शन गर्दै हेर्नुहोस् आज सोमबारको राशीफल !!
कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस् आज आइतबारको राशिफल !!
“नेपाली आर्ट,कल्चर एण्ड म्युजिक अवार्ड-२०२०” हुने, आबेदन…